Fampiharana Elfsight: E-varotra, endrika, votoaty ary Widget ara-tsosialy mora azo ho an'ny tranokalanao | Martech Zone
Talata, Martsa 22, 2022 Alarobia, Aprily 27, 2022 Douglas Karr
Raha miasa amin'ny malaza ianao sehatra fitantanana atiny, matetika ianao dia hahita fitaovana sy widgets izay azo ampiana mora foana hanatsarana ny tranokalanao. Tsy ny sehatra rehetra no manana an'ireo safidy ireo, na izany aza, matetika dia mitaky fampivoarana antoko fahatelo hampidirana ireo endri-javatra na sehatra tianao hampiharina.
Ohatra iray, vao haingana, ny hoe tianay ny hampiditra ny Google Reviews farany amin'ny tranokalan'ny mpanjifa nefa tsy mila manamboatra ny vahaolana na misoratra anarana amin'ny sehatra famerenana iray manontolo. Te-hampiditra widget iray mampiseho ny hevitra fotsiny izahay. Soa ihany fa misy vahaolana amin'izany – Ny widget Elfsight dia manampy amin'ny tranokala iray tapitrisa hampitombo ny varotra, hampifandray ny mpitsidika, hanangona fitarihana, sy ny maro hafa. Ny zavatra mahafinaritra amin'ireo widgets ireo dia tsy mila coding… ary afaka manomboka maimaim-poana ianao!
Widget tranokala Elfsight
Elfsight dia manana fanangonana fampiharana mahery vaika mihoatra ny 80 azo ampiasaina ho an'ny mpampiasa, ao anatin'izany ny widget media sosialy, famerenana widgets, widgets e-commerce, widget chat, endrika widgets, video widgets, audio widgets, sarintany widgets, photo gallery widgets, slider widgets, PDF embed widgets, menu. Widget, Widget kaody QR, Widget toetrandro, Widget fikarohana… ary am-polony hafa. Ireto misy vitsivitsy amin'ireo widgets malaza kokoa.
Widget fanamarinana taona - Raha toa ka mila manamarina ny taonan'ny mpampiasa iray ianao ary manokatra ny fidirana amin'ny tranokalanao raha tsy efa antitra izy ireo, dia andramo namboarina Widget Fanamarinana Age Elfsight. Mifidiana môdely sahaza na mamorona anao manokana hatrany am-boalohany, mametra ny fetran-taona ho an'ny karazana vokatra serivisy, mifidiana iray amin'ireo fomba fanamarinana telo, ampio ny lahatsoratry ny hafatra, ary alaivo ny toe-javatra ho an'ireo mpampiasa tsy ampy taona.
Lahat-in-One Chat Widget - Mampiasà fomba tsotra sy mahomby hifandraisana amin'ireo mpampiasa anao ao amin'ny Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, na Viber avy hatrany amin'ny tranokala. Minitra vitsy monja mba hanamboarana sy hametrahana ny widget.
Lahat-in-One Review Widget – Misy fotoana tsy ilanao sehatra fitantanana famerenana… te-hampiditra widget ao amin'ny tranokalanao ianao miaraka amin'ny fanehoan-kevitry ny mpanjifa miaraka amin'ny anaran'ny mpampiasa, ny sarin'ny mombamomba azy, ary ny fandefasana mankany amin'ny pejinao amin'ny tranokala famerenana momba ny fandraharahana avy hatrany. mpitarika mpanjifa. Elfsight dia manolotra loharano 20+ toa ny Google, Facebook, Amazon, eBay, Google Play Store, Booking.com, AliExpress, Airbnb, G2Crowd, Yelp, Etsy, OpenTable, ary maro hafa. Fomba mahomby hanamafisana ny fahamendrehan'ny marikao izany! Ity misy ohatra mahafinaritra avy amin'ny a mpiantoka tafo miara-miasa amin'ny:
Widget fameram-potoana fanisana - Mamorona fameram-potoana famokarana varotra ho an'ny tranokalanao Elfsight Countdown Timer. Hamafiso ny rivotra ary mamorona fahatsapana tsy fahampiana ho an'ny entanao, mampiseho ny fomba namidy azy ireo eo imason'ny mpanjifa. Ampitomboy ny fahamaikana amin'ny fividianana miaraka amin'ny fotoana hidina mandra-pahatapitry ny vanim-potoana tolotra manokana. Sariho ny saina amin'ny hetsika ho avy ary tazony miandry fatratra ny fanombohana ny mpihaino anao miaraka amin'ny fameram-potoana fanisana.
Widget kalandrie hetsika - Widget ahafahanao mizara mora foana ny asanao amin'ny tontolo hafa. Ahitana fahafahana be dia be hanehoana ireo hetsika ho avy amin'ny fomba mahasolo tena indrindra. Ataovy manokana izany mba hanambatra ny endrika amin'ny famolavolan'ny tranokalanao. Manaova hetsika marobe, ampio marika, ampidiro ny sarinao sy horonan-tsaryo manokana, ary ampahafantaro ny mpampiasa momba ny fandaharam-potoananao.
Facebook Feed Widget - mamela anao hampiseho votoaty avy amin'ny pejy Facebook voatanisa, izay anananao fidirana admin. Raha mitantana pejy fandraharahana ao amin'ny Facebook ianao dia afaka mampiditra azy mora foana amin'ny tranokalanao. Ny atiny rehetra ampidirinao amin'ny pejinao media sosialy dia havaozina ho azy ao amin'ny tranokalanao.
Widget mpamorona endrika - ny hany zavatra ilainao dia ny manana karazana famenoana rehetra ao amin'ny tranokalanao. Manolotra fitaovana manerantany izahay izay manana ny zava-drehetra ahafahanao mamorona endrika isan-karazany hanangonana angona avy amin'ny mpanjifanao. Fifandraisana, endrika fanehoan-kevitra, Fanadihadiana, endrika famandrihana - na inona na inona karazana ilainao, ataovy azo antoka fa tohanan'ny fampiharana anay izany ary mila segondra vitsivitsy ny fanamboarana azy.
Google Reviews Widget - Ampitomboy ny isan'ny mpihaino amin'ny tsikera momba ny orinasanao ary avoaka ao amin'ny tranokalanao. Ny Widgety dia hanampy anao hampiseho ny hevitrao amin'ny antsipiriany miaraka amin'ny anaran'ny mpanoratra, ny sarinao ary ny rohy mankany amin'ny kaontinao Google mba hahazoana hevitra vaovao kokoa. Izany dia fomba mahomby hanaporofoana ny fahamendrehan'ny marikao! Azonao atao ny mandamina tsikera mba hampisehoana ny tsara indrindra, hanova ny firafitry ny lahatsoratra, naoty fampisehoana, sy ny maro hafa. Havao ho azy miaraka amin'ny tsikera vaovao ny tranokalanao rehefa mivoaka. Manamboara widget Elfsight maimaim-poana.
Instagram Feed Widget - asehoy ny sary avy amin'ny Instagram amin'ny fomba rehetra misy - tenifototra, URL, na solon'anarana, ary ny fitambaran'ireo. Tena mora ny mameno ny sakafonao! Ho an'ny fifantenana atiny tsara indrindra dia azonao atao ny mampiasa sivana fahana roa karazana - tsy tafiditra amin'ny loharano ary tsy aseho afa-tsy amin'ny iray voafetra.
Widget biraon'ny asa - Widget tranonkala ahafahanao manambara ny toerana banga misokatra sy mandray CV avy amin'ny kandidà eo amin'ny tranokalanao amin'ny fomba mora idirana indrindra. Amin'ny alàlan'ny Widget vaovao, azonao atao ny manambara ny orinasanao, mamoaka vaovao momba ny fisokafan'ny asa ary mahazo tohiny. Ny widget dia ahafahanao mamorona karatra asa miaraka amin'ny sary marina sy bokotra Ampiharo. Ny fampiasana Elfsight Job Board dia ahafahanao manamora ny fizotran'ny fandraisana mpiasa ary mahazo valiny amin'ny fanokafana asa amin'ny tsindry iray.
Widget Fampisehoana Logo – asehoy ny fango rehetra an'ny mpiara-miombon'antoka na ny mpanohana na ny filazana an-gazety ao amin'ny tranokalanao. Miaraka amin'ny fanampian'ny widget dia hasehonao fa mpiara-miasa azo itokisana ianao ary mamorona sary tsara momba ny orinasanao. Ny widget dia ahafahanao manampy logos rehetra, mampiseho azy ireo amin'ny slider na grid, ary manova ny haben'ny logos. Azonao atao ny manampy lohateny sy rohy mankany amin'ny tranokalan'ny orinasa. Miaraka amin'ny fanampian'ny loko sy ny endri-tsoratra safidy, dia ho afaka ny hamorona tsy manam-paharoa endrika.
Popup Widget - Na inona na inona karazana popup tianao ho hita ao amin'ny tranokalanao - azonao atao ny manamboatra azy amin'ny alàlan'ny Elfsight Popup. Ampahafantaro ny varotra sy ny tolotra manokana, manangona mpanjifa sy valiny, velomy ny sarety nilaozana, asehoy ny pop-up fandraisana tsara, mampahafantatra ny fandefasana ho avy… Mahazoa izay ilainao!
Pinterest Feed Widget - asehoy ny mombamomba anao manokana, ary izay pins sy boards avy amin'ny Pinterest amin'ny tranokalanao. Miaraka amin'ny fitaovantsika, mifidiana boards sy pin ary mamorona fanangonana sary ho an'ny tranokalanao. Asehoy ny portfolio-nao, manentana ny mpanjifanao hahita zava-baovao na alaivo sary an-tsaina fotsiny ny votoatin'ny tranokalanao. Ny famahanana Pinterest namboarina dia hanampy anao hanitatra ny fahafahan'ny atiny, hampitombo ny firotsahana amin'ny mpitsidika tranokala ary hitondra mpanaraka bebe kokoa amin'ny Pinterest.
Vidin'ny tabilao Widget - Asehoy amin'ny antsipiriany ny tolotrao ary hanampy ireo mpitsidika ny tranokalanao hahita haingana sy hampitaha ireo endri-javatra samihafa atolotry ny drafitra vidinao. Mampiasà fanasokajiana ambony indrindra mba hanomezana endrika tsara indrindra ny vidinao - ataovy mifanaraka amin'ny foto-kevitry ny tranokalanao, na mamirapiratra sy manintona. Ataovy mihetsika ny mpividy anao ary ampitomboy ny fiovam-po!
Widget Menu Restaurant - Widget mora ampiasaina hanehoana ny sakafo fisakafoanana na kafe ao amin'ny tranokalanao. Fomba tsara hampahafantarana ny vahiny momba ny zavatra manokana ataonao izy io, maneho hevitra tokana ary mamolavola azy ireo amin'ny sary sakafo mahasarika. Izy io dia mety ho fitaovana tsotra hanatanterahana na dia asa sarotra aza: afaka manolotra menus maromaro miaraka amin'ny entana marobe ianao. Na asehoy fotsiny lisitra fohy amin'ireo zavatra manokana tompoinao. Aza misalasala misafidy tetika maivana, maizina na amboary izay rehetra tianao, hosodoko indray ny loko accent rehetra. Ny fahafahana lehibe indrindra amin'ny widget dia ny mijanona ho vaovao hatrany: afaka manova ny vidiny ianao, lisitry ny entana, manampy sakafo vaovao na menus amin'ny tsindry iray! Tsy misy rakitra PDF sy menus tokony hosoratanao any am-piandohana. Atombohy fotsiny amin'ny famoronana ny menu manaitra anao dieny izao ary jereo ny isan'ny famandrihana sy vahiny tsy mitsaha-mitombo.
Widget fahana sosialy - Mamorona famahanana ara-tsosialy mahavariana avy amin'ny fitambarana tsy misy fetra amin'ny loharano maro: Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, Pinterest, Tumblr, RSS (ho avy tsy ho ela - LinkedIn sy ny maro hafa). Raiso ny tsara indrindra amin'ny traikefa hita maso miaraka amin'ny sary Instagram sy horonan-tsary YouTube. Na azonao atao ny mamorona fahana vaovao avy amin'ny hafatrao Facebook sy Twitter. Ankafizo ny fanitsiana loharanon-kevitra mora entina hanehoana karazana atiny, tohanan'ny tambajotra sosialy tsirairay. Ampiharo karazana sivana mazava tsara mba hanamboarana ny fahanao na hampiasa fomba fandrindrana manual.
Widget Slider Testimonial - Ny fanehoana ny valin-tenin'ny mpanjifa tena izy miaraka amin'ny traikefa tsara dia manentana ny mpitsidika hanana traikefa mitovy ary manome porofo ara-tsosialy bebe kokoa ny vokatrao na serivisy. Ataovy ny fijoroana vavolombelona ho an'ny mpanjifanao ho tohan-kevitra mandresy amin'ny alàlan'ny fampisehoana azy ireo eo amin'ny toerana nanaovana ny fanapahan-kevitra momba ny fividianana ary jereo ny fomba hampitomboana ny varotrao.
Midira amin'ny mpampiasa 1 tapitrisa hafa mampiasa Elfsight Apps ary mamorona ny widgeto voalohany izao:
Mamorona Widget Elfight voalohany anao
Fambara: mpiara-miasa amiko aho Elfsight ary mampiasa ny rohiko aho mandritra ity lahatsoratra ity.
Tags: Widget fanamarinana taonaWidget kalandriechat widgetWidget fameram-potoana fanisanaWidget fanisanaelfsightWidget kalandrie hetsikaWidget hetsikawidget Facebookendrika widgetgoogle review widgetInstagram WidgetWidget fanokafana asaWidget asaWidget fampisehoana logologo widgetWidget famahanana pinterestwidget pinterestWidget popuplatabatra momba ny vidinyWidget tabilao pricingRestaurant MenuWidget sakafo fisakafoananafamerenana widgetrss widgetfahana ara-tsosialyWidget fijoroana vavolombelonatiktok widgetWidget TumblrWidget twitterWidgetyoutube widget
Appointiv: Manamora sy manamora ny fandaharam-potoana fanendrena amin'ny alàlan'ny Salesforce